Warshadaha Soosaarka Shiinaha iyo Warshadaha Shiinaha Pantex
Wejiyada wejiga waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan, laakiin dhammaantood waxay bixiyaan caag caag ah oo daboolaya wajiga. Difaaca ugu habboon, gaashaankuna waa inuu ka hooseeyaa garka gadaashiisa, dhegaha gadaashiisa, waana inaysan jirin faraq u dhexeeya futada iyo madaxa madaxa gaasha. Difaaca wejiga uma baahna waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay soo-saarka iyo khadadka wax soo saarka si dhakhso leh loogu soo celin karaa.
Difaaca wejiga ayaa bixiya faa'iidooyin badan. In kasta oo maaskaro caafimaadku leeyihiin cimrigooda oo xaddidan isla markaana ay yar tahay awoodda wax canaanashada, gaashaanka wejiga ayaa dib loogu isticmaali karaa si aan xad lahayn oo si sahal ah ayaa loogu nadiifin karaa saabuun iyo biyo, ama jeermisyada guryaha la wadaago. Waxay kufiicanyihiin inay xidhaan, difaacaan xayndaabyada galida fayraska, iyo inay yareeyaan suurtagalnimada isqarxin iyada oo ka hortagaysa kuwa wax sita inuu taabto wajigooda. Dadka xirtaan maaskaro caafimaad had iyo jeer waa inay iska saaraan si ay ula xiriiraan dadka kale ee agtooda ah; Tan lagama maarmaan ma ahan gaashaanka wejiga. Adeegsiga gaashaanka wejiga sidoo kale waa xasuusin si loo joogteeyo fogeynta bulshada, laakiin waxay u oggolaaneysaa aragtida muuqaalka wajiga iyo dhaqdhaqaaqa dibnaha aragtida hadalka.
Moodel No:: FB013
Cabbirka: 33 x 22cm
Waxyaabaha: PET + Isbuunyada
Waxaa laga sameeyay PET hufan (Polyethylene terephthalate) oo leh weji xajiye ah oo laba-gees leh, dib loo isticmaali karo, iyo dabool difaac ayaa lagu nadiifin karaa jeermis dile.
Ilaalinta wajiga oo dhan:
Gaashaanka wajigaan waxaa loogu talagalay inuu ka ilaaliyo wajigaaga oo dhan inuu buufiyo iyo dhibicyo, dhibic, boodh, qiiq saliid iwm
Codsi ballaaran: Ku habboon guriga, dukaannada ama isticmaalka ilkuhu, boodhka iyo caddeynta firidhsan.
Super hufan, Xiriirka dusha sare ee maqaarku wuxuu leeyahay isbuunyo jilicsan, xarig waa dabacsan, waana mid fudud, xirafad badanna leh.
Way fududahay in la waafajiyo caado leh gogosha laastikada ah, leh mid sugan oo aamin ah, waxay ku habboon tahay cabirka madaxa oo dhan, mid cad oo saafi ah, iyo meel bannaan oo u dhexeysa wejiga iyo daboolka ilaalinta.
Hore: Daboolida Kabaha Tuur
Xiga: Faa'iidada Go'aanka ah ee la tuuray